Ukuthengisa okushisayo kakhulu i-A3 Ceramic Printer China Manufacturer
Incazelo:Izindleko zephrinta yeCeramic,I-Ceramic Printer Diy,I-Ceramic Printer Ebay
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yeCeramic > Ukuthengisa okushisayo kakhulu i-A3 Ceramic Printer
Ukuthengisa okushisayo kunazo zonke i- A3 Ceramic Printer ingaphrinta ibhodlela le-cylinder, isikwele, flat, lingaphrinta i-spherical ephakathi. Yiqiniso, indawo yephethini engashicilelwa ihlobene nohlobo lwebhotela. Uma i-cylinder evamile, efana nokwakheka kwebhola elimhlophe le-Moutai, lingaphrinta isonto. Uma isikwele singanyatheliswa ngokuqondile ngaphambili, njengoLuzhou Laojiao, uma lesi sphere sinyatheliswa endaweni eyisiyingi esingaba ngu-4cm ububanzi, njenge-Yanghe River blue classic. Ibhodlela lewayini le-cylinder liphrinta kanjani umbuthano? Inkampani yethu ithuthukise ukufa kokujikeleza okujikelezayo okujikelezayo, okufakiwe kuphrinta uma isetshenzisiwe. Kungashintsha ngokuzenzakalelayo amabhodlela.
Izici eziwusizo zokuthengisa kwethu ezishisayo kakhulu I-A3 Ceramic Printer RF-A3UV:
2. I- Ceramic Printer Diy ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. I- Ceramic Printer Ebay I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Iphrinta yeCeramic Okuhle kakhulu: I-CISS ngaphandle kwenkinobho ye-ink + okushicilelwa kokushicilela okuphumayo + umphumela omuhle + womsebenzisi-friendly
Izindleko zephrinta yeCeramic I-Ceramic Printer Diy I-Ceramic Printer Ebay Izindleko zephrinta yekholi yefoni Izindleko zephrinta ye-UV flatbed Inani lephrinta le-Ceramic Iphrinta ye-UV Ceramic Iphrinta ye-Ceramic Tile